အသံဖြင့်ထိန်းချုပ်နှင့်အတူ NAVIGATION - ရေကြောင်း - 2019
တိုင်းဖန်တီးမှုလူတစ်ဦးရသောအခါငါ့ဦးခေါင်းသည်အသစ်တခုစိတ်ကူးများ၏တွေအများကြီးနဲ့ခဲတံ၏နေရာလေးကို stack ပြန်, ငါ့ကလေးဘဝ၌သူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကစားသမားဘစတင်သည်။ သို့သော်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးနည်းနည်းပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်များသောအားဖြင့်အစီအစဉ်ကိုဆွဲဖွင့်အဆုံးသတ်ကလေးတွေအတွက်လက်မှာယခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်ကိုကိုယ့်သားသမီးများ၏တစ်ဦးပရိသတ်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော Tux Paint ဖြစ်ပါသည်။
Tux Paint - ထိုပုံဆွဲဘို့ (ချီးမြှင့်ထားပြီးဖြစ်သော) အခမဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ချိုသောတေးသံနှင့်အရောင်စုံ interface ကိုအားဖြင့်သက်သေအဖြစ်ဒါဟာအထူးသ, သားသမီးရဲ့ပရိသတ်ကိုဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမကအတွင်းဆွဲရန်ရပ်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသည်အသုံးပြုသူများ, ဒါပေမယ့်မဆိုလေးနက်သောရည်ရွယ်ချက်အလွန်ခက်ခဲ program ကိုသုံးစွဲဖို့ပါ။
program ကိုသားသမီးတို့အဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ကတည်းကဒီ feature လုံးဝသင့်လျော်သောဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ မတူညီသော tools တွေကိုဆွဲတဲ့အခါမှာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအသံကိုနားထောငျနိုငျသညျ။ အဆိုပါသံကိုစတီရီယိုဂုဏ်သတ္တိများသည်နှင့်ပတ္တူ၏ညာဘက်အခြမ်းအပေါ်ဆေးသုတ်, ထို့နောက်အသံလက်ျာကော်လံအတွက်ကစားပါလိမ့်မည်ဆိုပါက။ အဆိုပါအသံ setting တွင်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
တူရိယာတစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမျိုးမျိုးသူမကနှင့်သားသမီးရဲ့အစီအစဉ်ကိုသူငယ်ငြီးငွေ့စရာမဖြစ်သင့်သောကြောင့်, အကြောင်း, သော်လည်းသပိတ်မှောက်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကို tool ကိုကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲအများကြီးရှိပါတယ်, ပေါင်းကဒီရန်, သငျသညျနောက်ထပ်ပိုပြီး program ကိုမျိုးစုံမှအပိုဆောင်းတံဆိပ်ခေါင်းများနှင့်စုတ်တံဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ က "မှော်" tool ကိုမှာအပိုလက်ကိုအထူးသဖြင့်အများကြီး။
Fixed window size ကို
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုပြတင်းပေါက်ပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်ပုံစံများကိုအမြဲတမ်း setting တွင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့်တူညီအရွယ်အစား, ရပါလိမ့်မယ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်မဟုတ်။ ကနဦးဒိုးကိုအရွယ်အစား 800600 သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ကလေးသူငယ်အခဘာမှမပြင်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းမပေးရန်သကဲ့သို့ပရိုဂရမ် settings, အဆွဲ toolbar ကိုအပေါ်မရှိကြပေ။ အဲဒီအစား, သူတို့တစ်တွေကို standalone လျှောက်လွှာအဖြစ် program နဲ့ installed နေကြသည်။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်အသံကို turn off နှင့်ဗီဒီယိုညှိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးသူငယ်အခ program ကိုကျော်လွန်မသွားပါဘူးနိုင်အောင်, mouse ကို cursor ကိုဖမ်းယူရန်။ အဲဒီမှာသင်ကပိုပြီးရိုးရှင်းအောင်, ကိုပရိုဂရမ်များ၏ကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာအခြို့ကို turn off နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်စံအရောင်များအပြင်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်သော palette ကနေရှေးခယျြနိုငျသညျ။
ရိုးရှင်းတဲ့ interface ကို
ဒါဟာရုရှားများမှာအချို့သောအဘယ်သူကို၏ 129 ဘာသာစကားများ, ထောက်ခံပါတယ်
ပိုပြီးလေးနက်စီမံကိန်းများအတွက်ကိရိယာတခုအဖြစ်နှင့် ပတ်သက်. ဤအစီအစဉ်ပါကချို့ယွင်းချက်တွေအများကြီးကိုရှာဖွေဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်ပဋိသန္ဓေ ယူ. နှင့် developer များကြောင့်မှတ်လျှင်, အဘယ်သူမျှမအားနည်းချက်များရှိပါသည်။ ဒီ tool ကအခွင့်ပြုထားအဖြစ်အပြင်ကအပိုငျးအအမျိုးမျိုးဆွဲရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Tux အခမဲ့ Paint Download
အဆိုပါအစီအစဉ်၏တာဝန်ရှိသူတဦးက website ကနေနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
Tool ကိုစိုင်း Paint Paint.NET paint 3D Pixelformer
Tux Paint - ကလေးများရည်ရွယ်သောပုံဆွဲကိရိယာများနှင့်အဆင်သင့်လုပ်တင်းပလိတ်များ၏ကျယ်ပြန့နှင့်ဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ: သစ်မွေးမြူရေး Software များ